IAmazon Prime iyakwaziswa ngeApple TV kwiWWDC elandelayo | Ndisuka mac
Inkulumbuso yeAmazon iza kubhengezwa ngeApple TV kwiWWDC elandelayo
Abasebenzisi abakhulu beAmazon banethamsanqa. Ngokukodwa ukuba banesizukulwana se-4 se-Apple TV ngaxeshanye. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ugxa wethu uJosé Alfocea usixelele loo nto I-Prime Prime yeAmazon inokufikelela kwiApple TV, kwihlobo elilandelayo. Ngoku Buzzfeed, Ithetha nathi ngesivumelwano ekufikelelwe kuso phakathi kwala maqela mabini. Ukuqikelela Isibhengezo senziwa kwinkomfa yonjiniyela elandelayo eza kubanjwa ekuqaleni kukaJuni. Nangona kunjalo, insiza iya kufumaneka ngasekupheleni kwehlobo. Kude kube lelo xesha, kufuneka sanelisekile kukubona igridi yomxholo nge-iPhone, i-iPad okanye isikhangeli sethu seMac.
Ezi zigebenga zibini zilinganise amandla azo okoko iAmazon yarhoxisa ukuthengisa ivenkile yayo ekwi-intanethi, isizukulwana sesine se-Apple TV, ngo-2015. Izizathu ezinikezwe yiAmazon yayikukwala kuka-Apple ukubandakanya iAmazon Prime application kwiApple TV. Ngeli xesha bekukho amahemuhemu okuba iAmazon inokuba nomdla wokukhupha isidlali somxholo, kwisitayile seApple TV. Ngelo xesha, u-Apple akazange enze izinto zibe lula kuye ngokufuna imbuyekezo ebonakalayo yezemali ngokuba nesicelo sakhe kwibloko ye-multimedia.
Izinto zibonakala ngathi zitshintshile kwaye iAmazon iyakuthengisa isixhobo seApple kwivenkile yayo edumileyo kwi-Intanethi.
Njengenxalenye yesivumelwano phakathi kwezi nkampani zimbini, iAmazon- eyekile ukuthengisa izixhobo zeApple TV kwiminyaka emibini eyadlulayo, xa izixhobo zikaGoogle zeChromecast zazingavunyelwanga kwivenkile yayo ekwi-Intanethi- ziya kuqhubeka nokuthengisa iApple TV.
Umhla omiselweyo wokubuya kwe-Apple TV kwivenkile yeAmazon awaziwa okwangoku.
Ke ngoko, abalandeli abanomdla, Kuya kufuneka silinde uMvulo olandelayo, nge-5 kaJuni, ngeenkcukacha ezithe kratya, kunye nenkcazo elindelekileyo yeMacOS 10.13 kunye neendaba ezahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Inkulumbuso yeAmazon iza kubhengezwa ngeApple TV kwiWWDC elandelayo
IMacPaw ivula iMic Museum entsha eKiev, eUkraine
Abezonxibelelwano olulula bavumela ukuba senze ikopi yogcino lwabafowunelwa bethu kwaye sabelane nabo nge-imeyile